Izizathu zokungathengi i-smartphone ephezulu | Izindaba zamagajethi
AmaVillamandos | | AmaSelula, I-Telephony
Ezinsukwini zakamuva bengibhekisisa ukuthi kungenzeka yini ukuthi ngithole i-smartphone esezingeni eliphezulu, intengo yayo idlula kude ama-euro angama-600. Ekugcineni nangemva kokucabangisisa ngokujulile nginqume ukuthi angizukuyithenga, futhi bengifuna ukuxoxa nami nonke ngalo mbhalo engiwubize ngegama lami "Izizathu ezi-6 zokuthi kungani ungafanele uthenge i-smartphone ephezulu" nokuthi ngithemba ukuthi uyakuthola kuthakazelisa futhi kungakusiza ngesinye isikhathi.
Ngaphambi kokuqala ngezizathu ezingiholele ekutheni ngithathe isinqumo sokuthi ekugcineni ngingatholi umakhalekhukhwini osezingeni eliphezulu, ngifuna ukukutshela ukuthi ngizokukhombisa kuphela izizathu eziyi-7 zesinqumo sami sokugcina, yize bengingakutshela lokho eziningi sezidlalile plus. Uma futhi ubheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi uthole i-smartphone entsha, engikukhuthazayo ukuthi usebenzise ishidi ukubeka ukuthengisa nobubi, futhi ngaphezu kwakho konke uthathe isikhathi sakho ukwenza isinqumo futhi ungazivumeli ukuthi uphathwe yijubane futhi izinkanuko.
1 Intengo yayo; umbhedo wangempela
2 Ezinsukwini ezimbalwa ngingathola ukubiza isigamu
3 Idizayini yakho iyinkinga
4 I-smartphone yakho, ingcebo yakho
5 Singathola into efana kakhulu ngentengo ephansi kakhulu
6 Ngeke sisizakale ngakho
Intengo yayo; umbhedo wangempela
Ngicacile ukuthi i-smartphone esezingeni eliphezulu isinikeza izici ezihamba phambili emakethe, ukwakheka ngokucophelela kuze kube semininingwane yokugcina futhi ezimweni eziningi uchungechunge lwezinketho nemisebenzi engatholakali kunoma iyiphi ifoni ephathekayo. Noma kunjalo Ngicabanga ukuthi intengo yalezi terminals ingumbhedo, ezimeni eziningi edlula ama-euro angama-700, ngeshwa ngumholo wabantu abaningi namuhla.
Lapho ngiyithenga, ngiyazise inketho yokuzuza ngosebenzisa umakhalekhukhwini, abathi nakanjani basebenzise leli thuba "lokusetha" isilinganiso, futhi esiphakeme futhi okufanele ukhokhele omunye umbhedo ngaso okungenani u-18 noma Izinyanga ezingama-24. Kukhona nezinketho zokuxhasa ngedivayisi, kepha lokhu kusho ukuthi ezimweni eziningi izindleko ezikhuphula intengo yokugcina ye-smartphone. Vele kukhona nethuba lokuyikhokha ngokheshi, kepha ukungibiza ngokuxakile noma okwehlukile, kepha ukusebenzisa imali engaphezu kwama-euro angama-700 ngenkokhelo eyodwa kimi kuyinto engacabangeki, hhayi ngoba ngingenayo, kepha ngoba kungalimaza kakhulu kangangokuthi angisoze ngakucabanga noma ngabe wayenayo imali.
Ezinsukwini ezimbalwa ngingathola ukubiza isigamu
Cishe yonke imikhiqizo esiyithengayo, vele uthathe i-smartphone yethu entsha ngaphandle kwebhokisi, ilahlekelwa yinani layo, noma ngabe sizama kanzima kanjani ukuyinakekela noma ukuyigcina ihlanzekile. Kwezinye izimo futhi kuya ngokuthi siyithola nini i-terminal yethu entsha, kungabiza uhhafu noma ngaphansi.
Lapho uthenga i-smartphone esezingeni eliphakeme, uma ekugcineni sizokwenza, kubalulekile ukuyithenga ngesikhathi esifanele futhi sicabangele ukwethulwa okulandelayo okuzokhiqizwa. Akunangqondo ukuthenga i-Samsung Galaxy S6 ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokwethulwa kwe-Galaxy S7, ngaphandle kokuthi siyithole ngentengo yokugogoda, okuvame ukuba yinto ejwayelekile.
Idizayini yakho iyinkinga
Iningi lama-smartphones abizwa ngokuthi ama-high-end design anomklamo owenziwe ngokweqile, kusetshenziswa izinto ze-premium futhi kuphelile ngokucophelela. Lokhu, ngokungangabazeki okuyisici esihle, nakho kunegethivu okuyiyo uma enye yalezi zingqungqulu iwela phansi, ingalimala kalula.
Ngizoba yindoda engajwayelekile, kepha angithandi ukuphatha ifoni yami ngekhava, ngakho-ke akufani nokuthi ngilahla i-smartphone engibize ama-euro angama-200, kunaleyo engiyikhokhele noma engikhokha ngayo i-800 noma ama-euro amaningi. Vele, uma enye yamatheminali amabili iwa futhi ingilimaza, ngicabanga ukuthi kungaba kubi izinsuku ezimbalwa.
I-smartphone yakho, ingcebo yakho
Ngiyaqiniseka ukuthi lapho uthenga i-smartphone ephezulu, konke kuyashintsha eduze kwethu futhi leyo divayisi iba ngomunye wemicebo yethu emikhulu, okufanele siyinakekele ngaso sonke isikhathi. Kumele ngivume ukuthi ngesinye isikhathi ngibe nenye yalezi zimota, ebengizikhokha ngokwenkolo okwesikhashana isikhathi esingaphezu konyaka, futhi engikubuke sengathi kungumcebo, ngicabanga abantu abaningi njengamasela omakhalekhukhwini wami oyigugu. Uhlanya noma cha, akungabazeki ukuthi i-iPhone noma i-Galaxy S6 esezandleni zakho ikwenza, ngeshwa futhi yize kuzwakala kukubi ukusho, ukuthi ungaba isisulu sokubanjwa inkunzi.
Ayanda amasela anikezelwe ukweba amadivayisi eselula futhi ukuthi ukuphuma kwayo emakethe kuhle impela. Uma uzothenga i-smartphone esezingeni eliphakeme, zama ukuyigcina ezindaweni eziphephile futhi uhlale unayo ngombono wokugwema ukungathandi ubukhulu obukhulu.
Singathola into efana kakhulu ngentengo ephansi kakhulu
Ngiyazi ukuthi kwabaningi lesi sizathu sizobonakala siyisiphukuphuku sangempela, ngoba akukho okufana ne-iPhone 6S noma i-Galaxy S6 Edge, okungenani ngokwakhiwa, kepha yebo kunamatheminali afanayo maqondana nokusebenza ngentengo ephansi kakhulu.
Isibonelo, amatheminali amaShayina aya ngokuya eba semfashinini, okungama-euro angaphansi kwama-300 ezimweni eziningi asinikeza izici nokucaciswa okufana nalokho okunikezwa ngamatheminali abizwa ngokuthi aphezulu. Amadivayisi we-Huawei noma we-Xiaomi angamatheminali aphezulu ngentengo engaphezu kokuthakazelisa, yize kunjalo, ukwakheka kwawo kukude kakhulu kunoma iyiphi i-Samsung noma i-Apple terminal ezimweni eziningi.
Ngeke sisizakale ngakho
Iningi lethu eline-smartphone silisebenzisela okungaphezu nje kokuthatha izithombe, lithumele imiyalezo ngesinye sezicelo zemiyalezo esheshayo noma ukuhambisa iwebhu. Ngalokhu asidingi noma ikuphi ukuthi sisebenzise inani elikhulu lemali ukuze sibe ne-terminal ephezulu.
Uma ungezukukhombisa ngeselula yakho bese ugcina nje ama-euro angamakhulu ambalwa bese usebenzisa amathuba abo okuya eholidini, isibonelo.
Imakethe yamaselula ibhekane nokwanda okukhulu ezikhathini zamuva lapho abakhiqizi bethula khona amadivayisi eselula minyaka yonke, noma isikhathi esincane, ngesiqinisekiso sokuthi abasebenzisi bazokwethula ukuwathenga ngenhloso yokuba nemodeli yakamuva futhi bajabulele izici zakamuva futhi ongakhetha kukho. Namuhla, futhi ngombono wami, amatheminali amaningi wezingcingo ezisezingeni eliphakeme anezintengo ezihlanyayo, okungukuthi, nokho, azenzi abasebenzisi bafune ezinye izinketho.
Ngiyaqiniseka ukuthi luzofika usuku, njengoba kwenzekile nakwezinye izimakethe, imakethe yezingcingo ezomakhalekhukhwini izongena enkontilekeni, futhi bonke abakhiqizi kumele behlise intengo yezimakethe zabo. Ngenkathi lolo suku lufika, noma ngubani ofuna ukuba ne-smartphone esezingeni eliphakeme kuzofanele akhokhe inani elikhulu lemali ngalo, yize ungakwazi ukuthenga idivaysi ephezulu, ngemuva kwesikhashana. Kulesi sihloko sikwenzela okunye ukuncoma kwe- ube ne-smartphone enhle ngaphandle kokuchitha imali eningi kakhulu.
Ingabe ungomunye walabo abakhokha ukuze babe ne-smartphone ephezulu noma omunye walabo, njengami, abancamela ukuncika kwezinye izinketho?. Ungasinika umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngokusebenzisa noma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izizathu ze-6 zokuthi kungani ungafanele uthenge i-smartphone ephezulu
Ngijabule kakhulu nge-z30 yami, ngiyisebenzisa njengekhompyutha kunoma yikuphi ukuqapha, iphelele impela, ayisoze yehluleka nebhethri ihlala isikhathi eside, futhi ayibizi njengalezo ezisezingeni eliphakeme, kufanele funa ukusebenza ngaphambi kwemfashini
Uma uthenga iselula kufanele wazi ukuthi ingabe ilifanele ngempela inani enalo, ngoba i-iPhone 6S engu-16Gb ayinakuba nenani lika- € 750 noma i-Samsung s6 € 600.
Namuhla, amanani agcwele kakhulu, kepha kunabantu abaningi abathenga iselula yomkhiqizo hhayi eyokusetshenziswa.
Ngokuvamile, ngicabanga ukuthi bonke bagcwele kakhulu futhi okwenzekile ngemakethe yezezakhiwo kuzokwenzeka kancane ...
Ngiyavuma. Ngithenge i-Samsung S5 ngesikhathi iphuma okokuqala, ngithenge i-mini ngoba enye inkulu kakhulu futhi ayizwani nokuthanda kwami. Iqiniso ukuthi kulokho okwakubiziwe ngangikulindele kakhulu futhi empeleni kuyafana njalonjalo nelinye igama (ngaphandle kweminye imisebenzi emisha engenzi mehluko omkhulu). Ngemuva kokuyithenga futhi uyisebenzise, ​​uyabona ukuthi intengo ihaba kakhulu.
Uma unayo imali yithenge futhi uyijabulele. Uma ungafuni ezinye izindlela ezifanayo lolo suku olushisayo lungene emakethe kahle kakhulu ngokutshalwa kwemali okuncane
Sawubona! I-athikili inhle kakhulu futhi ngiyavumelana nayo, lokho kwenzeka naku-Nexus yamanje, ikakhulukazi i-Nexus 6p, ebiza kakhulu futhi into engiyibukayo ukuthi i-Motorola Nexus 6 yangaphambilini, ishibhile kakhulu ukuthi uma ithe ukuba nkudlwana kune-6p, kepha anginandaba, ngiyahamba ngayo, bengihlele ukuthenga i-LG G4, kodwa cha, ngijwayele izibuyekezo ngosuku (ngoba ngine-5Gb Nexus 32, kodwa ngeshwa kungilimazile) futhi leyo yinto ebengiyithanda, ngaphandle kokuthi i-interface ye-Nexus ihlanzekile ngokuphelele futhi ayinadoti omningi okonakalisa ukusebenza kwemishini. Ngakho-ke, uma uNkulunkulu ethanda, ngizoya nge-Motorola Nexus 6, ezobuyekezwa kuze kube ngomunye unyaka nengxenye ka-2017.
Ngathenga i-S6 ejwayelekile esitolo sokuthenga / esithengisa inyanga eyodwa ngemuva kokukhishwa kwayo, i-1eu ishibhile kunentengo yayo ngaleso sikhathi (130. Kusha ngokuphelele futhi nomshwalense engiwubeke kuwo, ukuthengiselana, kungangibiza ama-eu angama-699 ambalwa okubiza kakhulu uma ngiyithola enkampanini yezingcingo ewolintshi (okungokwami) kokunye ngiyakucabanga lokho nami. Ngiqonde ukuthi uma uthatha isinqumo sokuthenga iselula esezingeni eliphezulu kufanele ume kakhulu uma uyithenga, miningi Ezinye izindlela lapho ungayithenga khona ishibhile uma ingena emakethe.Mayelana neselula, ithi ngigculisekile impela futhi ngicabanga ukuthi bekufanelekile, lesi yisiphetho sokuqala enginaso nomehluko ngeSony Xperia I-SP iyabonakala kakhulu Okuwukuphela kwento engiyithola ifana nokusebenza kwebhethri, lena izoba neprosesa eningi ye-EXYNOS kodwa impilo yayo yebhethri ayihambelani nentengo yayo, ukuphela kwento ebiza ngokushesha.
Ngubani owenze lokhu okuthunyelwe akanayo i-smartphone ephezulu. Sizobona:
1. Intengo ye-smartphone esezingeni eliphezulu inengqondo ngoba uzothatha umshini onakho konke futhi ngoba uzohlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho uzoba nezibuyekezo zakamuva ze-Android noma ze-iOS.
2. Ayikho i-smartphone ebiza uhhafu wentengo ezinsukwini ezimbalwa. Lokhu kuvame ukwenzeka ngemuva kwezinyanga.
3. Design akunankinga. Kuyinto enhle kakhulu ye-smartphone. Uma uphatha kahle i-smartphone yakho, izokuhlala isikhathi eside. Kuya ngokuthi uqaphe kangakanani.
4. Okuningi okufanayo. Nakekela kahle i-smartphone yakho futhi akukho okuzokwenzeka kuyo.
5. Lapha unesizathu esithile. Ungathola into efanayo eshibhile kepha uzolahlekelwa yikho konke lokho i-smartphone esezingeni eliphakeme enayo ngempela. Umehluko uphawuleka impela.
6. Lokhu sekuzithobele ngokwengeziwe. Kukhona abayithenga ngokuthanda, ukubukisa, ukuhamba nje kuWhatsApp, kodwa kukhona nalabo abathola lonke ijusi ku-smartphone (bayisebenzisa ngokunenzuzo ngo-100%).
7. Ngingumnikazi we-Galaxy Note 4. Nginayo unyaka ongu-1 futhi nginayo entsha, ngaphandle kokuklwebheka. Futhi ngizoqhubeka nalesi siginali iminyaka embalwa. Cabanga ngokucophelela ukuthi iyiphi oyothenga nokuthi uzoyisebenzisela ini ngempela. Yonke i-terminal inemisebenzi abantu abangazi ukuthi banayo futhi engaba wusizo olukhulu. Futhi ngizoma lapha vele i-xD.
U-Ellys ross kusho
Ngaphandle kokuphambuka okungaka uma ngiyithanda ngiyayithenga futhi kuphele kanjalo, kimi, okwakho ukukhungatheka! Pos kungenzeka ukuthi awukwazi ukuyithenga futhi uzenzele isizathu, kepha hhayi sonke esinjalo, kulungile
Phendula u-Ellys Ross
Ngincoma windows windows, ngama-euro angaphansi kwama-300 futhi ahamba njengekhukhamba. Ake siyeke ukunikela ngemali yethu ku-google / android nakubantu babo ...
Omar morales kusho
I-athikili ethakazelisa kakhulu yabathengi abangu-5% abahlaziya utshalomali lwabo. Abangu-95% abasele bathenga isiphetho esiphezulu ngesizathu esilula: Ngesimo
Namuhla kubaningi kakhulu, umakhalekhukhwini ufana neSimo Somphakathi futhi kungenzeka ungadli, ukhokhele izinsizakalo noma iMortgage. Kepha ukuletha okusha okusha okuphezulu kungukufanisa okuhle ukuthi uphumelele empilweni.
Lokhu kuchaza amanani ahlekisayo lapho kunikezwa le mishini
Phendula u-Omar Morales
soy yo kusho
Izizathu zokungathengi iselula ye-Premium:
1 Anginayo i-turkey
2 Ngiyinja eshaya umtshingo
3 Ngokuhambisana nomhlobiso womjondolo wami
4 Anginayo ibhalansi
5 Angikwazi ukufunda nokubhala
Bayangintshontshela uma ngikanisa ePuerta del Sol
7 Uma ngiyithengisa ngemuva kokuyisebenzisa, angiholeli lutho
Indoda eyiqiniso impela, ngikhokhela i-galaxy note 3 futhi ngeke bayibuyekeze bese bethatha isinqumo sokuthenga iXiaomi ngqo kusuka efemini ngo-1/4 kuphela walokho okuphume i-Samsung
ULouis blaine kusho
Mnumzane ngiyehluka, uHuawei osezingeni eliphezulu unekhwalithi nokuklanywa ezingeni le-Samsung ne-Apple, inkinga ukuthi zibaluleke ngokufanayo, phenya kahle
Phendula uLuis Blaine
UMiguel Ramirez kusho
Abaningi bacela ukuphela okuphezulu uma bengathathanga ngisho namandla ayi-100 weqiniso ongakhetha kukho okuhle kakhulu kungaba ukukhetha amabanga aphakathi anjenge-motorola noma i-huawei anomklamo omuhle futhi ongabiza noma ngubani futhi onentuthuko cishe kuyo yonke into
Phendula uMiguel Ramirez
UDkt McNinja kusho
Izinga eliphezulu akulona elabantwana noma elabampofu. Uma inani eliphelele limelela kuphela ingxenyana yamasonto akho amabili, zonke ezinye izimpikiswano zilahlekelwa umusi.
Phendula uDkt McNinja
Mnu kubonakala sengathi akuhlangani ukuthenga i-smartphone esezingeni eliphezulu ngoba nje kuyimfashini noma umngani anayo, into yokuqala okufanele ibhekwe ukusebenza kwayo, kimi ngine-S5 futhi akukhona ukuthi angikwazi ukuyishintsha nge-S6 kodwa cha ngiyibona ikhiqiza
Ngijabule nge-oneplus yami emibili, engakholeki kukho konke, ngingahlala ukuthi isebenza kuphela ama-3g eMexico kepha ngenye indlela inhle kakhulu
Thatha ithuba lokwehla kwentengo kwakho ongakwazi (i-Europe) ukuthenga amafoni ngemuva kwezinyanga ezimbili ekhishiwe. Okungenani eMexico, uma ucingo lubiza ama-11000 (€ 600 approx.) Ama-Pesos uma ekhishwa ngemuva kwezinyanga eziyi-10 asabiza ama-11000 afanayo, lapha opharetha bayahlukumeza kakhulu, okubi kakhulu ukuthi kukhona ama-sonzo athenga imodeli kusukela onyakeni owandulela lezi zintengo futhi emasontweni amabili kamuva imodeli entsha iphuma nomehluko wentengo omncane, konke lokhu okufuna ukulandela imisa.
Yindatshana ewubuwula kakhulu, ngithole okuningi ngocingo lwami oluphezulu, ngejubane lokuphendula nekhwalithi yekhamera. Vele akukho ukushoda kwabathembele phansi abakhononda ngomnotho futhi abafuna ukuzwelwa, kepha kufanele uhlale ukhumbule ukuthi bangamafoni abazowasebenzisa isikhathi eside, hhayi ukuwashintsha njalo ezinyangeni eziyisithupha ... INexus 6 futhi angisoze ngayiqhathanisa nokuthile okuphakathi nendawo… .. Ikhwalithi iyabonakala, iyabonakala, iyabonakala futhi ibiza… Umuntu ngamunye angathenga akufunayo noma angakuthola.
Isazi sefilosofi kusho
Ngine-z2 futhi iqiniso angizisoli ngokuchitha imali enhle ngoba ngithola okuningi kuleli thoyizi elincane
Isivinini sokuphendula kweprosesa yaso, impilo yebhethri ende, ukuxhumana kwayo kwe-OTG kuvumelana nethelevishini yami, ikhamera yayo, ngoba ngiyakwazi ukuskena amadokhumenti kahle futhi ngiwahlele futhi inkumbulo yayo inwebeke ize ifike kuma-gigabytes ayi-128. Ngeke ngikushintshe, kuzoba ukuthi ngithanda ukusizakala ngotshalomali lwami!
Thethelela ukukubonisa kepha ngiyincoma ukunethezeka!
Phendula isazi sefilosofi
Intengo yala ma-mobiles ilingana nomholo uma uwukhokha ngokheshi (okuthile okumbalwa abakwazi ukukukhokhela nokuthile noma ngubani okhokhisa inani eliseduze nalokho okushiwo yilezi zici ze-mobile ngeke akwenze) Ukungayikhokhi ngaleyo ndlela futhi uyithathele imali yokuthengisa noma isitolimende yinkampani yezingcingo. Masithathe isibonelo se-S6 lapho iphuma, i-32GB ejwayelekile iye ku-699, lokhu okuxhaswe izinyanga ezingama-24 kungasibiza u- € 25 / ngenyanga, okungaba ngaphezulu nje kwe-3% yomholo womuntu obiza ama- € 800, ngoba isibonelo. Akubonakali kuyimpikiswano enamandla kimi ukuthi ngingathengi umakhalekhukhwini osezingeni eliphezulu, okungathi uma ungaphansi kuka-700 ube nawo futhi uzokukhokhela nesikhathi.
Bengifuna ukusho € 29 / ngenyanga
Ngaphezu kwalokho, amafoni aphezulu aletha imiphumela emangazayo nebhethri elincane. Ngesizinda esigqwayizayo uphelelwa ibhethri lapho uthinta, kufanele ulawule ukukhanya ngaso sonke isikhathi, akunikezi
Iningi labantu, bobabili abanesixazululo sezezimali sokuthenga izingcingo eziningi ezisezingeni eliphakeme nalabo abangena ezikweletini ukuze bazithenge, abavamisile ukuma bacabange ukuthi bazolisebenzisa ngempela yini inani lesikhungo. Ngibonile ukuthi abantu abanezingcingo ezibiza kangaka bakwenza ngokuthanda kwabo, ukuthola isikhundla, ukuncintisana nokuthi ubani onefoni ebiza kakhulu (okuthile okuyisilima) noma ukuhambisana nobuchwepheshe. Iqiniso elingemuva kwalo ukuthi bayizisulu zokumaketha nokuphelelwa yisikhathi okuhleliwe.
Ngigculiseke kakhulu nge-moto G yami, ngingaxoxa nawo wonke amanethiwekhi omphakathi, ngibuke amavidiyo we-HD, ngiphathe imisebenzi kusuka ku-Google Drayivu, ngiqale izingcingo zevidiyo, ngisebenzise ideskithophu ekude, thatha futhi ubuke izithombe namavidiyo ngokufanele (uyazi ukuthi okuthinta ikhwalithi yezithombe ukuvulwa kokugxilwe ngaphezu kwe-MPx enekhamera), ngikwazi ukufinyelela kunethiwekhi ye-4G ... Into efanayo engenziwa yiphela ephezulu, kepha ngemali encane kakhulu. Mhlawumbe ngingumsebenzisi ongafuni lutho hahahaha. Ozithobayo!
Ngine-clone ye-iPhone 7 plus, ingibize izinkulungwane ezingama-3, ishibhile uma iqhathaniswa nama-peso ayi-25 ayizinkulungwane, futhi isebenza ngokufanayo, ibukeka ifana futhi ukuqeda kuyinto yokunethezeka, mncane kakhulu, yinhle, inezingxenye zekhwalithi futhi kuthatha izithombe ezinhle , inezingcingo ezinhle nesiginali yefoni enhle kakhulu ne-wifi, nginezinhlelo zami zokusebenza futhi iyashesha, iyiselula enkulu, futhi ngicabanga ukuthi ibifanele inani layo, ngisho ishibhile ngendlela ebukeka futhi isebenza ngayo. Futhi angizange ngikhokhe izinkulungwane ezingama-20, futhi umngani wami unayo uqobo futhi siyisebenzisela okufanayo, izithombe, umculo, ne-Intanethi, ngakho-ke ngicabanga ukuthi ngangihlakaniphe kakhulu hahahahaha.
Amaqhawe omdlalo wevidiyo aphenduka amahlongandlebe